Posted by ကို Tranquillus | မေလ 30, 2018 | ရုံး
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစံစကားလုံး Processor ကို အကယ်. မရှိသေးပါအခမဲ့နှင့်အညီအမျှထိရောက်သောနှင့်လက်တွေ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ပွင့်လင်းရုံး, အကောင်းဆုံးအခမဲ့စကားလုံး Processor ကို:
ဒီဆော့ဗ်ဝဲလူကြိုက်အများဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်ပါသည် စကားလုံး ထိုသို့ပြည့်စုံရုံး suite ကိုနှင့်အတူဤတဦးတည်းဆင်တူသည်။ အကြောင်းမူကား,
ပွင့်လင်းရုံးအားဖြင့်သင်တို့ကို MS Office (Word, ထုတ်ဝေ, သွင်းကုန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးနိုင် Excel ကို သို့မဟုတ် PowerPoint) ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မူရင်းပုံစံဖို့ဒါမှမဟုတ် OpenOffice format နဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်နှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစ, သင်သမ်မာကမျြးတူ, spreadsheets သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်အတွက်ထပ်မံသွားရခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Google Docs စကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့အွန်လိုင်း:
မတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google Docs ကတခြားအပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲမှအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဤသည်ကပြင်ဆင်ရန်ဖန်တီးစာရွက်စာတမ်းများ, စာသားများ, ရေးဆွဲ, တင်ပြချက်များအားဖြင့်စာရင်းဇယားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဝေမျှဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာနှင့်အတူ Google ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Google Docs ကို အသုံးပြု. မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်, နောက်ဆုံးတော့ဘယ်နေရာမှာမဆို၎င်းတို့၏စာတမ်းများကို access, ဒါပေမယ့်လည်းဝေမျှနှင့်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်နှင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူစတင်များဖြစ်ကြ၏။
WPS ရုံး, တစ်ဦးအလင်းပေမယ့်ပြည့်စုံစကားလုံး Processor ကို:
အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါကဤအပြောင်းအလဲနဲ့ software ကိုနှုတ်မြွက်တော်များ၏ staunchest ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဆွဲဆောင်နေသည်။
အဆိုပါ interface ကိုအခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုညီမျှနှင့်အတူက MS Office ကိုမှနီးပါးတူညီသည်။
တဦးတည်းစာသား, spreadsheets သို့မဟုတ်တင်ပြချက်များအပြင်, ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
လိုက်ဖက်မှုကြောင့် WPS Office ကိုအားလုံးအတွက် Microsoft Office ကိုကို formats ကြောင်းဘက်မှာအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေကို support အဖြစ်။
LibreOffice တစ်ဦးအခမဲ့ရုံး suite ကို:
သမ်မာကမျြးအပြောင်းအလဲနဲ့, spreadsheet, ဒါမှမဟုတ်တင်ဆက်မှုက LibreOffice စကားလုံး processor နဲ့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအောင်မြင်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်မှု၏၎င်း၏လွယ်ကူခြင်းအားလုံးကို formats အားဖြင့်စကားလုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းက OpenOffice ၏အဓိကအခြေခံမူကြာပေမယ့်တစ်ဦးသင့်လျော်သော interface ကိုအတူ။
ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုကို software ကိုများအတွက်ဿုံသင့်လျော်သည်။
Zoho စာရေးဆရာ, Google Docs ရဲ့ညီဖြစ်သူ:
အဆိုပါစကားလုံး Processor ကိုရိုးရှင်းစွာအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးကိုလည်းအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အော့ဖ်လိုင်း mode ကိုသင်နောက်တစ်နေ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှာကယ်ဖို့စာသားဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
သမ်မာကမျြးအပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖျဝဲ သြဂုတ်လ 19th, 2018Tranquillus